Shirka madasha oo lasoo gaba-gabeeyay iyo war-murtiiyeed laga soo saaray (AKHRISO WAR-MURTIYEEDKA) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka madasha oo lasoo gaba-gabeeyay iyo war-murtiiyeed laga soo saaray (AKHRISO WAR-MURTIYEEDKA)
Waxaa goordhaw xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyay shirka madasha wadatashiga oo maalmihii ugu dambeeysay halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhaw shirkaasi kusoo xiray xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi laga soo saaray war-murtiyeed dhowr qodob ka kooban
Shirkaasi ayaa maalmihii uu socday waxaa la isku af-garan waayay qodobo dhowr ah oo markii dambe la isku af-gartay.
War-murtiyeedka laga soo saaray shirkaasi ayaa ah mid ay si wadajir ah isugu raaceen madaxda shirka, islamarkaana dhawaantaan la dhaqan gelin doono.
Guddi amni uu madaxweyne Xasan Sheekh gudoomiye ka yahay ayaa shirka madasha wadatashiga lagu magacaabay, wuxuuna war-murtiyeedka u qornaa sida hoos ku xusan:-
Muqdisho 6-12 Septembar 2016
Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ) ayaa kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho 06 – 12 Seteember 2016 ka. Kulanka waxaa shir- guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka soo qayb galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari; Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke; Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka, Mudane Maxamed Cumar Carte; Madaxweynaha Puntland, Mudane Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas; Madaxweynaha Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam; Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan; iyo Madaxweynaha Galmudug, Mudane Cabdikarin Xuseen Guuleed.